अमेरिकामा प्रतिदिन १ लाख कोरोना संक्रमित बढ्ने फाउचीको चेतावनी – Khabar Silo
अमेरिकाका शीर्ष संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा. एन्थोनी फाउचीले देशको सिनेट समक्ष अमेरिकामा प्रतिदिन एक लाख कोरोना संक्रमित फेला परे आफू आश्चर्यमा नपर्ने बताएका छन्।
‘स्पष्टरूपमा भन्नुपर्दा हामी नियन्त्रणमा छैनौं’, सिनेट समक्ष उनले भने।
अमेरिकीहरूले पर्याप्तमात्रामा मास्क नलगाइरहेको र सामाजिक दूरी पनि नमानेकाले समस्या बढ्न सक्ने उनको भनाइ छ।
बिबिसीमा प्रकाशित समाचारका अनुसार सुनुवाइका क्रममा फाउचीले पछिल्लो समय अमेरिकामा भेटिएका आधा भन्दा बढी संक्रमित चार राज्यबाट भएको जानकारी सिनेटसमक्ष गराएका थिए।
मंगलबारमात्र अमेरिकामा ४० हजार नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। यो संख्या पाँच दिनको अवधिमा चौथो पटक देखिएको हो।
अमेरिकाको दक्षिणी तथा पश्चिमी राज्यहरूमा संक्रमित संख्यामा वृद्धि हुँदै आएको छ। त्यहाँ देखिएको संक्रमण वृद्धिका कारण कम्तीमा १६ अमेरिकी राज्यले लकडाउन खोल्दै जाने आफ्नो योजनालाई तत्कालका लागि रोकिसकेका छन्।
फाउचीले पछिल्लो समय फ्लोरिडा ऐरिजोना, टेक्स र क्यालिफोर्निया राज्य संक्रमणबाट सर्वाधिक प्रभावित बनेको बताए।
संक्रमित बढ्न थालेपछि १६ अमेरिकी राज्यले आफ्नो राज्यमा आउनेले अनिवार्य १४ दिन क्वारेन्टाइन बस्नुपर्ने नियम लागु गरेका छन्।
यो नियमले अमेरिकाका करिब ४८ प्रतिशत अमेरिकी नागरिकलाई प्रभावित पार्नेछ।
फाउचीले के भने?
सिनेटसमक्ष आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा फाउचीले अमेरिकी राज्यहरूले लकडाउन खोल्ने क्रममा ‘आधारभूत आधार’लाई नजरअन्दाज गरेको र यसले संक्रमित संख्या बढ्ने बताए।
‘म ठ्याक्कै यति नै हुन्छ भनेर अन्दाज गर्न सक्दिन तर यो भयावह हुनेछ, म यसको ग्यारेन्टी गर्छु’, फाउचीको भनाइ उद्धृत गर्दै सिनेटर एलिजाबेथ वारेनले भनिन्।
‘किनकी देशको एउटा भागमा महामारी भइरहेको अवस्थामा अर्को भागले राम्रो गरिररहे पनि उनीहरू जोखिममा रहिरहन्छन’, फाउचीले भने, ‘हामी महामारी बढीरहेको भएको ठाउँमा मात्र ध्यान केन्द्रित गर्न सक्दैनौं। यसले पूरा राष्ट्रलाई जोखिममा पार्छ।’
यसैगरी डा. फाउचीले अमेरिकी सरकारलाई मास्क उत्पादन गर्न र मानिसहरूलाई निःशुल्क वितरण गर्ने सुझाव दिएका छन्। उनले सामाजिक दूरीको वास्ता नगर्ने अमेरिकी नागरिकहरूको आलोचना गरेका छन्।
सोल : उत्तर कोरियाली नेता किम जङ उनका अभिव्यक्ति, निर्णय र गतिविधिबारे विश्व समुदायको कुनै न कुनै चासो हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया उनका गतिविधिलाई लिएर अनेक टिप्पणी गर्छन् । खासगरी अमेरिकासँगको सम्बन्ध कसरी अघि बढ्ला भन्नेमा धेरैको चासो छ । उनै नेता किम हालै सेतो घोडा चढेर उत्तर कोरियाको सर्वाधिक अग्लो शिखर माउन्ट पाइकेतो पुगे […]
अमेरिकी राष्ट्रपति निवास ह्वाइट हाउसअगाडि भएको प्रदशर्नले उग्र रूप लिएपछि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई बंकरमा लगेर राखिएको खुलेको छ। शुक्रबार राति ह्वाइटहाउस अगाडि भएको प्रदर्शनमा प्रदर्शनकारीले ढुङ्गामुढा गर्न थालेपछि उनलाई सेक्रेट एजेन्टहरूले सुरक्षाका लागि बंकरमा लगेको खुलेको हो। आतंकवादी समूहको हमला वा आपतकालिन सेवाको लागि बनाइएको बंकरमा ट्रम्पलाई आधा एक राखिएको समाचार संस्था एसोसियट प्रेसले जनाएको […]
एट्लेटिकोसँग बराबरीमा रोकियो बार्सिलोना, मेसीले गरे करिअरको ७००औं गोल